खराबी सहनेले आशिष प्राप्त गर्नेछ । - EL-Shaddai Family
Home Channels Daily Bread खराबी सहनेले आशिष प्राप्त गर्नेछ ।
मे १४, बिहिबार
साटो फेर्ने र बदला दिने काम मेरो हुन । व्यवस्था ३२ : ३५
घटना भएको तीन वर्ष भईसकेको थियो, एउटा अविश्वासी दिदी एक शानिबार सुसमाचार सेवामा उपस्थिति हुनुभयाे, सेवा सकेपछि उहाँले प्रभुलाई गह्रण पनि गर्नुभयाे । हामी अचम्मति पर्यो, सोहि परिचित दिदीले तीन वर्ष अगाडि एउटा विश्वासी शिक्षकलाई आफनो नानीको विषयमा अपमान गरेका थिए । आज परमेश्वरले ति महिलालाई त्यही विश्वासी शिक्षकको सामू यो घटना हुन दिनुभयो अथवा येशूको नाममा पाप क्षमा मागी विश्वास गर्ने ।
यहून्ना २६ : ५१, ५२ मा हामी पढछौ, जब येशूलाई पक्रिन भनी सिपाही र पुजारीहरु येशू र चेलाहरुको सामु आए तब पत्रुसले आफनो तरवार निकालेर महापुजारीको दासलाई हिर्काए र दाहिने कान च्वाट्टै काटिदिए । तब येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो तरवार नचलाऊ किनभने तरवार वा शारीरिक लडाई गर्ने त्यसरी नै नष्ट हुनेछ, आज जुन हुन लागेको कुरा छ, यो पहिल्यै भविष्यवाणी भएको छ र मैले यो कुरा सहनै पर्छ भनेर येशूले पत्रुसलाई सम्झाँउनु भयो । यो कुरा स्पष्ट पार्नलाई येशूले भन्नुहुन्छ के म अहिलै नै पितालाई पुकारेर बाह्र पल्टनभन्दा बढी स्वर्गदूतहरु मेरो छुटकाराको लागि पिताले पठाउनुसक्नु हुन्न र ?
तर येशूले भन्नुभयो यो अहिलेलाई हुन अवश्यक छ, र मैलै जसरी नि यो सहनु नै पर्छ । यसको बदला मैले आफै लिन जरुरी छैन । परमेश्वरले आफनो समयमा, जब उहाँको क्रोध चुलिन्छ र उहाँले त्यसको निम्ति खराब वा असलको योजना बनाउँनुहुन्छ । उहाँले त्यसलाई फेरि अनुग्रह दिएर बचाउँन नि सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई नाश नि गर्नुसक्नुहुन्छ तर तिमीहरु साटो फेर्ने काम नगर् किनकि बदला दिने काम मेरो हुन । व्यवस्था ३२ : ३५ ।
पत्रुसले गरेको भुल पत्रुसले पछि गएर स्वीकार्छ र अनुभवमा भन्नुहुन्छ १ पत्रुस ३ : ९ मा खराबीको बदलामा खराबी नगर, अथवा गालीको बदलामा गाली नदेओ, तर उल्टो आशिष देओ, यो जानेर कि तिमीहरु आशिषका हकदार हुनलाई बोलाएका छौ । हामीले सह्याैं भने त अाशिषकाे हकदार पाे बन्ने रहेछाैं ।
Surely Blessing is there When you keep on enduring evil circumstances in Christian Life.
हाम्रो प्रार्थना : हे प्रभु मलाई आउने सबै खराबी म सहन सकौ र त्यसमा राखिएको आशिष पाँउन सकाै । मलाई सामर्थ दिनुहोस ताकि म बाट बदलाको भवना हटेर जाओस । धन्यवाद प्रभु यो रहस्यमय ख्रीष्टको जीवनमा बुझाईदिनुभयो यसलाई म पालन पनि गर्नसकौं ।
Listen Today Blessing Audio
Previous articleDedicated Lines in the memory of Late. Bada DanielRai
Next articleबडा दानियललाई सम्झना गर्दे – मेरो छोटो अनुभव